Nnwom 140 NA-TWI - Banbɔ mpaebɔ - Awurade, gye me fi - Bible Gateway
Nnwom 139Nnwom 141
Nnwom 140 Nkwa Asem (NA-TWI)
140 Awurade, gye me fi nnebɔneyɛfo nsam; na bɔ me ho ban fi basabasayɛfo nsam. 2 Daa wɔdwene bɔne ho na wɔakɔka ntɔkwaw. 3 Wɔn tɛkrɛma te sɛ awɔ a bɔre ahyɛ wɔn ma. 4 Awurade, bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo tumi ase; gye me fi basabasayɛfo a wɔdwene tia me, pɛ m’asehwe no nsam. 5 Ahantanfo asum me firi; wɔasum wɔn mfiri na ɔkwan ho nyinaa wɔasunsum mfiri repɛ me ayi me.